နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP) (ခ) နှင်းဆီပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် စိစစ်တွေ့ရှိချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြား | Myawady Webportal
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP) (ခ) နှင်းဆီပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် စိစစ်တွေ့ရှိချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြား
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးသည် ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် သတင်းမီဒီယာ များအား နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် Press Briefing Room ၌ Physical Distancing သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တွေ့ဆုံပြီး ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP) (ခ) နှင်းဆီပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် စိစစ် တွေ့ရှိချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ယနေ့ရှင်းလင်းပွဲတွင် ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
(UDP) (ခ) နှင်းဆီပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် စိစစ်တွေ့ရှိချက်များကို တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဦးကျော်မြင့်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုနှင့် ဝင်ငွေရလမ်းများကို အဓိကထား စစ်ဆေးကြောင်း၊ ၎င်းပိုင်ကုမ္ပဏီများသည် ဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင် ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ်၊ ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများသည် တရားဝင် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများမှ ရရှိခဲ့ခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ်၊ ဦးကျော်မြင့်နှင့် ၎င်းပိုင်ကုမ္ပဏီများသည် သက်ဆိုင်ရာ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ၎င်းပါတီ၏ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများအား အတိုးရယူပြီး တရားမဝင်ငွေချေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ဥပဒေနှင့် ညီ၊ မညီ အဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း။
ဦးကျော်မြင့်ပိုင်သည့် MYANMAR KYAW INVESTMENT GROUP Co., Ltd. ကို စိစစ်သည့် အခါတွင် အဓိကလုပ် ဆောင်မည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ ငှားရမ်းခြင်း၊ အငှားချထားသော လုပ်ငန်းများနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မည်ဟု မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းလိုင်စင်မှာ သက်တမ်းကုန်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းလိုင်စင်ကို အသုံးပြုပြီး ပို့ကုန်သွင်းကုန် ခွင့်ပြုပေးထားမှုတစ်ခုမျှ မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ တင်ပြလျှောက်ထားခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားမှု မရှိကြောင်း၊ ယင်းကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက် တစ်စုံတစ်ရာမရှိသည့်သဘော တွေ့ရှိရကြောင်း။
နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Myanmar Kyaw High Tech Co., Ltd. ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကုမ္ပဏီ အဓိကလုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားရေးမှာ ရုံးလုပ်ငန်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့ပေးနေသော လုပ်ငန်းများဟု ဖော်ပြထား ကြောင်း၊ ယခင်က ယင်းကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထား ကြောင်း၊ ယခုအခါ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်သက်တမ်းမှာ ကုန်ဆုံးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်များ လျှောက်ထားခြင်း၊ ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လျှောက်ထားခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုး မတွေ့ရကြောင်း၊ ယင်းကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏အဓိကဖော်ပြထားသော လုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသည်ကို တွေ့ရကြောင်း။
နောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Myanmar Kyaw Finance Co., Ltd. ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အဓိကလုပ်ဆောင် မည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အာမခံအထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မည်ဟု မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း၊ ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ယင်းကုမ္ပဏီကို ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးထားခြင်း မရှိကြောင်း၊ ထို့အတူ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ကလည်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးထားခြင်း မရှိကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက် ရှိသော်လည်း ကျန်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် မရှိကြောင်း။
ဦးကျော်မြင့်နှင့် ၎င်းပိုင်ကုမ္ပဏီများ၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားမှု အခြေအနေမှာ ဦးကျော်မြင့်အမည်ဖြင့် ငွေစာရင်းခုနစ်ခု၊ Myanmar Kyaw High Tech Co.,Ltd. အမည်ဖြင့် ငွေစာရင်းနှစ်ခု၊ Myanmar Kyaw Finance Co., Ltd. အမည်ဖြင့် ငွေစာရင်းနှစ်ခု၊ MYANMAR KYAW INVESTMENT GROUP Co.,Ltd. အမည်ဖြင့် ငွေစာရင်း ၁၀ ခု၊ UDP Educational Foundation အမည်ဖြင့် ငွေစာရင်း(၂)၊ United Democratic Party's Fund + ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း+ဒေါ်မျိုး ဟေမာန်အမည်ဖြင့် ငွေစာရင်း နှစ်ခု၊ ၎င်းနှင့်ဆက်နွှယ်ပတ်သက်သူများ၏ အမည်များဖြင့် ငွေစာရင်း ၃၄ ခု စုစုပေါင်း ငွေစာရင်း ၅၉ ခုကို ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ငါးခုတွင် ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ဦးကျော်မြင့်၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းများသို့ တရုတ်နိုင်ငံမှ တရားမဝင်ငွေလွှဲများဖြင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းရောက် ရှိလာမှုအခြေအနေ၊ ဘဏ်တိုးရရှိမှု အခြေအနေ၊ MYANMAR KYAW INVESTMENT GROUP Co.,Ltd. ချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်း အခြေအနေ၊ ဦးကျော်မြင့်၏ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံများနှင့် မော်တော်ယာဉ်များ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိစစ်တွေ့ရှိချက်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် ဦးကျော်မြင့်၏ ပစ္စည်း/ငွေကြေး ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းရောင်းဝယ်ခြင်းမှ ရရှိသည်ဟု ထွက်ဆိုသော်လည်း တရားဝင်အထောက်အထား တစ်စုံတစ်ရာ မတွေ့ရှိရကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်သူများ ထံမှတစ်ဆင့် ရောက်ရှိလာသည့် ၁၆ ဒသမ ၃၁၅ ဘီလီယံကျော်သည်လည်း တရားမဝင်လမ်းကြောင်း အဆင့်ဆင့်က လာပြီး ၎င်းဘဏ်စာရင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ဝင်ငွေရလမ်းမဖော်ပြနိုင်သည့် ငွေကြေးများကို ရယူသုံးစွဲခြင်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၄၃ အရ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေချမှတ်နိုင်ကြောင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည့်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ငွေကျပ် သန်း ၅၀၀ အထိ ငွေဒဏ်နှင့်ပိုင်ရှင်အား ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အတိုးဖြင့် ချေးငွေထုတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများကို ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ပါက ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅၉ နှင့် ၁၇၁ တို့အရ အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်မှ ငါးနှစ်၊ ငွေကျပ်သန်း ၅၀၀ ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ချမှတ်နိုင်ကြောင်း၊ တရားမဝင်အဆင့်ဆင့် လွှဲပြောင်းဝင်ရောက်လာသော ငွေကြေးများဖြင့် ပါတီကိစ္စရပ်များတွင် သုံးစွဲခြင်းသည် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ၆ (စ)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပေးရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် သတင်းမီဒီယာများက မေးမြန်းချက်များကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြား
ဆက်လက်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးကပြောကြားရာတွင် ဦးကျော်မြင့်ကိုစစ်ဆေးသည့်အခါတွင် အဖွဲ့များ ခွဲ၍ စစ်ဆေးကြောင်း၊ ယနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြသည်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်း ရယူမှုအပိုင်းကို ဦးစားပေး စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါကြောင်း၊ အခြားကိစ္စများကို ဆက်လက်စိစစ်နေသည့် အဖွဲ့များမှာ သီးသန့်ရှိကြောင်း၊ ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် စိစစ်တွေ့ရှိချက်များကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက အကြောင်းပြန်ကြားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ စိစစ်တွေ့ရှိ ချက်များအရ မည်သည့်ပုဒ်မများနှင့် ငြိစွန်းခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ကော်မရှင်က ဆက်လက်စိစစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရအပိုင်းက ဖော်ထုတ်ချက်များ အပေါ်တွင် ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည့် ကိစ္စများရှိကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။